Ajụjụ ọnụ a na María Oruña, onye edemede nke Ọhịa nke Ifufe Anọ | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Foto: María Oruña si Twitter
Maria Oruña were otu agbụrụ a na-enweghị ike ịkwụsị ma so n’otu ohuru nke amamiihe na-ede akwụkwọ ọgụgụ ojii na ọtụtụ ọ joụ na-enye ụdị ahụ. Ohia nke ikuku ikuku ano bụ akwụkwọ ọhụrụ ya, nke a ga-ebipụta n'ọnwa a. Onye edemede a mụrụ na Galician, ọ bụ ezie na ọ na-ede akwụkwọ akụkọ ya na Coastsọ oké osimiri Cantabrian, nye m ihe a Ajụjụ ọnụ ebe ọ na-agwa anyị ntakịrị ihe niile. Enwere m ekele maka oge gị, ntinye na obi oma.
AJ AJ WITH AZ WITHTA MARÍA ORUÑA
Akwụkwọ edemede: remember chetara akwụkwọ mbụ ị gụrụ? Na akụkọ mbụ ị dere?
Maria Oruña: Echetaghị m nke mbụ akwụkwọ m gụrụ, mana m nwere ike ikwu na nwata m jupụtara na ya ntochi: si Zipi na Zape, na-agafe Mortadelo na Filemon na-atọ ọchị akwụkwọ nsụgharị nke ochie nke Walt Disney; na ọtụtụ akụkọ ihe atụ. Ndi Hollister, ọnụ ọgụgụ akwụkwọ na Steamboat usoro… Ana m agụ ma ọ dịkarịa ala otu izu. Ihe mbụ m dere ha abụghị akụkọ, kama poems. Aka m nwere ha, mana ha ka dị nnọọ njọ.
MO: ahụrụ m ya n'anya Ebe ọwụwa anyanwụ nke Iden nke John Steinbeck dere (Agụrụ m ya dị obere, ya na ndị nke Barco de Vapor), maka vektị niile ọ lebara anya na maka mmetụta uche y emereme na peeji nke ọ bụla nwere.
MO: Geez nke ahụ bụ ahụkarị ajụjụ agaghị ekwe omume ịza. Ihe ha masịrị m ọtụtụ ede kpomkwem n'ihi dị iche na ha bụ, onye ọ bụla n’ime ha bụ ọkachamara n’ime ụwa nke aka ya, ọ bụ ezie na ọ bụ ehihie na abalị. Otherbọchị ọzọ m gụrụ Frankenstein na m dọọrọ n'agha site na nnukwu talent nke Mary Shelley. Ihe ha masịrị m Pérez Reverte, Pierre Lemaitre, Rosa Montero, Maximo Huerta, Dan Brown, Fred Vargas...
MO: Idem ama akpa mi, ke eyo esie, ke mmalite na ịdị ọcha de Lisbeth Salander kwuru, site na trilogy Chiefs nke Stieg Larsson dere. Echere m na ọ bụ mara mma nke ọma zuruutamente adọrọ adọrọ.
AL: Ọ bụla mania mgbe ọ na-abịa na-ede ma ọ bụ na-agụ?
MO: Echeghị m. M na-edekarị, ee, naanị ma ọ bụ naanị n'ọfịs mAgam eme njem na ajuju nke mbu.
MO: M dee ihe na nwa m akwụkwọ oge na ndị ọzọ oge efu na m na-akwa ákwá ruo ụbọchị. Iji na-agụ, oge ọ bụla ọ dị mma. Tupu nri ụtụtụ, akụkọ. N'abalị, akwụkwọ.
AL: Olee onye edemede ma ọ bụ akwụkwọ metụtara ọrụ gị dị ka onye edemede?
MO: Echere m na ndị niile gụrụla m. Agwaara m ha niile okwu, ọ bụrụgodi na m ga-edo anya ihe m na-achọghị ime. Mgbe m gụrụ Camilla lackberg Ọ masịrị m iji ya olu abụọ na ụgbọelu oge abụọ dee akụkọ; na mgbe m na-agụrụ ya ihe Dan Brown Ekwenyesiri m ya ike kpokọtara ihe nwere ike iji ndapụta na ezigbo akụkọ ihe mere eme imepụta akụkọ.
Ndị: Udiri nma gi?
MO: Ihe na-amasị m bụ dị nnọọ iche. Anaghị m agụ akwụkwọ akụkọ purist mpụ, mana akwụkwọ nke obinkoneelu, akụkọ ihe mere eme… All nnọọ iche iche. Enwere m akụkọ ndụ na akụkọ ọdịnala.
MO: Echere m Enweghị m ike ikwu yaỌfọn, ugbu a, m na-agụ akwụkwọ ụfọdụ akọwapụtara nke ọma akwụkwọ m ọzọ akwụkwọ. Y Anaghị m ede ihe ọ bụla. Anaghị m ede ruo mgbe m nwere de niile ihe onwunwe, na ijikọ ya ọnụ nwere ike iwe m ọrụ ọnwa anọ na ọnwa isii. Emechaa, m na-ede kwa ụbọchị.
MO: Echere m na ọ bụ gbagwojuru anya n'ihi na enwere ọtụtụ ihe na ọtụtụ ndị edemede ọhụrụ. Ọ dịghị mfe iyo ihe nwere ike ịmasị Maka onye na-agụ ya, ma ọ bụ akụkọ ndị dị a truthaa nwere eziokwu na ume dị mkpa iji rara mgbalị ahụ nye ha. Otú ọ dị, Echere m na ị ga-anọgidesi ike: ma ọ bụrụ na ihe onwunwe bụ na-egbuke egbuke, ìhè ya na-agwụcha hụ ebe ọ bụla.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ajụjụ ọnụ » Ajụjụ ọnụ nke María Oruña, onye edemede nke Forest of the Four Winds